Visa fizahan-tany 5 taona ho an'ny olom-pirenen'i UK. Visa an-tserasera India
Visa fizahan-tany 5 taona ho an'ny olom-pirenen'i UK
Fahafaham-pizahana Visa mpizahatany indianina
Ny olom-pirenena UK dia afaka mahazo visa e-Tourista 5 taona
Teratany britanika maniry hitsidika an'i India noho ny fitsidihana an-tsitrapo hihaona amin'ny namana sy ny fianakaviana, fitsangatsanganana na fialamboly na programa yoga dia afaka mangataka visa fizahan-tany mandritra ny 5 taona. Ny India Tourist eVisa dia antontan-taratasy ofisialy mamela ny fidirana sy fitetezana ao India ary mifandray amin'ny pasipaoronao amin'ny alàlan'ny elektronika.
Ny manampahefana Indiana misahana ny fifindra-monina dia nanova ny politikam-pizahantany Visa tamin'ny volana septambra 2019. Mba hahatanteraka ny fahitan'ny praiminisitra Narendra Modi ny fampitomboana avo roa heny ny isan'ny mpizahatany tonga any India avy any UK, dia nanambara ny minisitry ny fizahantany Prahlad Singh Patel fa hisy ny fiovana amin'ny Visa an-tserasera Indiana.
Manomboka amin'ny volana septambra 2019, dia misy mpizaha tany any amin'ny pasipaoro britanika maniry maharitra hitsidika an'i India im-betsaka ao anatin'ny 5 taona.
India Tourist Visa dia misy amin'ireto sokajy manaraka ireto:
Visa fizahan-tany any India 30 andro: Ny visa fidirana indroa manan-kery mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny daty nidirana ao India.
Visa fizahan-tany any India mandritra ny 1 taona (na 365 andro): Visa fidirana marobe marimaritra iraisana mandritra ny 365 andro manomboka amin'ny vanim-potoana fanomezana e-Visa.
Visa fizahan-tany any India mandritra ny 5 taona (na 60 volana): Visa fidirana marobe marim-pototra mandritra ny 5 taona manomboka ny vanim-potoana fanomezana e-Visa.
Fanamarihana fijanonana visa ho an'ny mpizahatany 5 taona ho an'ny olom-pirenen'i UK
Ho an'ireo manana pasipaoro UK ny fijanonana maharitra mandritra ny fidirana tsirairay dia tsy tokony hihoatra ny 180 andro.
Ny visa e-Tourista 5 taona dia matetika no avoaka ao anatin'ny 96 ora. Na izany aza, tsara ny mampihatra 7 andro mialoha ny sidinao.
Iza amin'ireo hetsika azo avela amin'ny Visa 5 mpizahatany?
India Tourist visa dia omena ireo izay mikasa ny handeha ho any India noho ny antony 1 na mihoatra:
Inona avy ireo toerana mahaliana indrindra ho an'ny olom-pirenena UK any India?
Experience Telozoro volamena- Tanàna manintona any Delhi, Agra ary Jaipur. Vonona ny hiaina glamor, lovantsofina, maritrano.
Goa - Raha tianao ny mozikanao dia tongava fitsidihana mafy an'i Goa izay malaza amin'ny fetibe fandihizana elektronika. Hilltop Festival sy Ozora's of Goa dia atao isan-taona amin'ny volana febroary.
Mitadiava fampiononana ao amin'ny tranonkala ara-panahy - Yogis manao fombafomba manaraka ny Ghats masin'i Ganges, ivon-toeram-pisaintsainana sy yoga ao Rishikesh. Any atsimo, i Madurai sy Tiruchirappalli dia 2 tsy maintsy tsidihina.
Valio ny antson'ny tendrombohitra - India dia manana fanangonana tobin'ny havoana any Jammu sy Kashmir, Uttarakhand ary Himachal Pradesh. Nainital, Mussoorie, Ranikhet ary Himachal Pradesh's Dharamshala, Dalhousie ary Shimla (renivohitra fahavaratra mandritra ny British Raj).
Mialà sasatra amin'ny morontsiraka sy ny lalan-drano - Mialà sasatra amin'ny morontsiraka fasika mainty amoron-dranomasina madio any Kerala toa an'i Varkala sy Kovalam
Fitsaboana Ayurveda any Kerala.
Hiaina maritrano manan-tantara - Any avaratra dia ahitanao ny fitaoman'ny Anglisy, Rajput ary Mughal raha ny South kosa dia nitaona ny portigey. Khajuraho dia toerana iray hafa fitsidihana malaza izay mampiseho andiana zavakanto amin'ny alàlan'ny tempolin'izy ireo. Ny lava-bato Ellora sy Ajanta dia tsy hita ao Aurangabad.
Mikaroha bibidia sy tigra lehibe - Ho fanampin'ny tahirin'ny Tigra any Ranthambore sy Corbett National Park, aza hadinoina ny fanangonana liona aziatika betsaka indrindra ao amin'ny valan-javaboary Gir Forest any Gujarat sy ny valan-javaboary Kaziranga National Park any Assam.